Caribbean Airlines dia manomboka indray ny asan'ny Jamaika
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Caribbean Airlines dia manomboka indray ny asan'ny Jamaika
Caribbean Airlines dia nanomboka indray ny asa ara-barotra nanomboka tamin'ny ivon-toeran'ny Jamaika nankany Etazonia sy Kanada. Ny sidina isan'andro mankany / avy any Kingston sy New York dia niverina tamin'ny 6 Jolay, miaraka amina fandefasana serivisy tsy an-kiato mankany Toronto sy Miami voalahatra mandritra ny herinandro.
Ny Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Caribbean Airlines, Garvin Medera dia nanambara fa: “Ny fiverenan'ny asa ara-barotra miorina any Jamaika dia nanamarika ny andro iray lehibe ho an'ny mpandray anjara rehetra. Ny ekipanay sy ny ekipanay dia eo am-piomanana amin'ny fanombohana ny sidina, ary nametraka fepetra maro izahay mba hiarovana ny mpiasanay sy ny mpandeha anay. ”
Mandritra izany fotoana izany dia manohy ny ezaka famerenana an-tanindrazana ny Caribbean Airlines, manome fanampiana ireo teratany karibiana tafahitsoka maniry ny hiverina any amin'ny fireneny.
Ny 6 jolay koa dia mpandeha 400 no noraisina tamina sidina fampodiana an-tanindrazana niasa teo anelanelan'ny Trinidad, Guyana, Cuba ary St Maarten; ary koa ny sata manokana ho an'ny mpiasa tantsaha 147 izay nankany Canada avy any Trinidad.
Anisan'ireo mpandeha ny mpianatra mpitsabo, teratany rehetra any Trinidad sy Tobago mianatra any Kiobà.
Nampitombo ny zotram-piaramanidina eo amin'ny tetezan'ny rivotra eo anelanelan'i Trinidad & Tobago ny zotram-piaramanidina; ary mitohy ny asan'ny Cargo, mampiasa ny fiaramanidin'ny fiaramanidina Boeing 737 sy ny serivisy mpitatitra entana.
"Tsy mila tampon-trano ny zavakanto" ao Vilnius
Nankatoavina tamin'ny fahazoana zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola i Dominica Hilton Resort